ရေညှိကြိုက်သူတွေအတွက် သတင်းကောင်း - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရ » ရေညှိကြိုက်သူတွေအတွက် သတင်းကောင်း
ကိုရီးယားကြည့်ရင်း မင်းသားမင်းသမီးတွေ ရေညှိထမင်းလိပ်စားတာတွေ့လိုက်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ရေညှိဟင်းချိုသောက်တာဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ရင်း စားချင်နေတတ်တဲ့ ရေညှိကြိုက်တတ်သူလေးတွေများရှိနေလား။ ဒါဆိုရင်တော့ စားသာစားပါ။ ရေညှိက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးများတာမို့ စားပါလို့ ပြောရတာပါ။ ရေညှိက ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲဆိုတာကို သိချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်ပါနော်။
ရေညှိက ပင်လယ်ရေပြင်ထဲမှာ ပေါက်ဖွားတဲ့ သဘာဝစားစရာတစ်မျိုးပေါ့။ အရောင်အသွေးကနေ အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊အညိုရောင် နဲ့ အနက်ရောင်ဆိုပြီးအရောင်အသွေးအမျိုးမျိုးပါပဲ။ ရေညှိက ပင်လယ်ပြင်ရှိနေတဲ့ ကမ္ဘာ့နေရာတိုင်းမှာရှိပေမယ့် ရေညှိကို အဓိကစားသုံးကြတာက ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ တရုတ်တို့လိုမျိုး အာရှနိုင်ငံတွေပါ။ ဂျပန်ဆူရှီဆိုင်တွေနဲ့ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေကြောင့် အခုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ရေညှိစားသုံးသူအရေအတွက် တော်တေ်ာလေးများလာပါပြီ။ ရေညှိက သတ်သတ်လွတ်စားသုံးသူတွေအတွက် ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေများစွာကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ စားစရာတစ်ခုပါ။
ရေညှိမှာ အာဟာရဓာတ်တွေ များစွာပါဝင်နေပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ်တို့ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။ ကယ်လ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းတဲ့ စားစရာတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
စားလို့ကောင်းသလို အာဟာရကြွယ်ဝတဲ့ ရေညှိလေးစားသုံးရင်းရရှိမယ့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့
သိုင်းရွိုက် ဂလင်းက ဟော်မုန်းတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့၊ ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့တာဝန်တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ပေးမှုက ခန္ဓာကိုယ်မှာ အင်အားတွေဖြစ်စေသလို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် နဲ့ ဆဲလ်တွေပြင်ဆင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။ ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက် အိုင်အိုဒင်းကိုလိုအပ်မှာပါ။ကိုယ်တွင်းမှာ အိုင်အိုဒင်းနည်းတဲ့အခါ သိုင်းရွိုက်ပြဿနာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အဖြေက သိုင်းရွိုက်ပြဿနာကင်းချင်ရင် အိုင်အိုဒင်းပြည့်ဝရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ရေညှိလေးက သဘာဝကပေးတဲ့ အိုင်အိုဒင်းပြည့်ဝတဲ့ စားစရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် သိုင်းရွိုက်ကျန်းမာစေဖို့ စားသုံးပေးလို့ရပါတယ်။
ရေညှိက အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် ဆီးချိုသမားတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်က သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးသလို အင်ဆူလင်ပမာဏကိုလည်း ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆီးချိုရှိသူတွေအနေနဲ့ သွေးချိုထိန်းရာမှာ အထောက်အကူပြုတဲ့ အမျှင်ဓာတ်ကို ကျန်းမာတဲ့ အစားအသောက်အရင်းအမြစ်ကရရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကယ်လ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပြီး အမျှင်ဓာတ်ကဲတဲ့ ရေညှိကို စားသုံးပေးပါ။
စားသုံးလိုက်တဲ့ အစားအစာတွေကို ဖြိုခွဲဖို့ နဲ့ အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေဖို့အတွက်ရော ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာစေဖို့အတွက်ပါ အရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့ ဇာတ်လိုက်လေးတွေက အစာခြေစနစ်ထဲက ဘက်တီးရီးယားတွေပါ။ ဒီတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်စေဖို့ဆိုရင် အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားလေးတွေကို အားဖြည့်ပေးဖို့လိုမှာပါ။ သူတို့ကို အားဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေက ရေညှိမှာပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရေညှိစားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် အစာခြေစနစ်က အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားလေးတွေကို ကျန်းမာစေနိုင်ပြီး အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်မှာပါ။ ရေညှိစားသုံးပေးမှုက ဝမ်းမချုပ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို ဝမ်းသွားနေတာကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ရေညှိမှာပါတဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေက ကိုယ်အလေးချိန်ချဖို့ကြိုးစားနေသူတွေအတွက် တော်တေ်ာလေးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ ရေညှိက ကယ်လ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပြီး အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုများတာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေဖို့ အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။
ရေညှိအပါအဝင် အမျှင်ဓာတ်များစွာပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေက သွေးတွင်းကိုလက်စထရောပမာဏကို ကျဆင်းစေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ရေညှိမှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ များစွာပါဝင်နေတာကြောင့် သွေးတွင်းကိုလက်စရောကို ကျစေတဲ့အပြင် နှလုံးကိုပါ ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
ရေညှိစားရင်း အခုလို အကျိုးထူးတွေရစေနိုင်တယ်ဆိုမှတော့ ရေညှိကြိုက်သူလေးတွေကို စားသာစား၊လို့ ပြောပါရစေနော်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖျောဝါရီ 21, 2019 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖျောဝါရီ 21, 2019
7 Surprising Health Benefits of Eating Seaweed https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-seaweed Accessed Date 21 February 2019
What are the benefits of seaweed? https://www.medicalnewstoday.com/articles/323916.php Accessed Date 21 February 2019
What Are the Health Benefits of Eating Seaweed? https://www.livestrong.com/article/18578-health-benefits-eating-seaweed/ Accessed Date 21 February 2019
ရင်သွေးလေးကို မီးမီးလေးမှ လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ စုံတွဲတိုင်းအတွက်။ ။